umbuzo Convair 990A & FSX
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #155 by FCAIR
Mna Fan Big kakhulu Convair 880 & 990. bezama ukufumana enye efakiweyo kunye VC iinyanga eziliqela kungekho luck. Ngaba ukhona umntu 880 okanye 990 kunye VC ukuba babeza kuba ukulungele ukwabelana. I bezama ukufaka convairs HJG kodwa zange zibonisa up in game. Emva kokuzama ukufumana ukuba basebenze ekugqibeleni baye kunike- ukusukela ukuba awunayo VC phofu. Enye imini, ndafumana enye kwisiza Airline Virtual zipeyintwe AA ekuqaleni 60 xa Paint libonakala in game kodwa akukho VC. Andinguye ifayile guy enkulu abasafunda kodwa ndikubonile izithuba malunga ngokudibanisa VC ukuya moya nabo ngoko ke nje ezibuza ukuba nabani na apha uyakwazi ukwenza njani oku okanye qondisa ukuba apho banokufunda le nkqubo. Ndiyabulela kwangoko
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #156 by douglasjaen
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #158 by Gh0stRider203
ok ngaba phi le ubuhle ??? Ndimelwe ukumfaka kwiqoqo yam!
Njengoko le ngxaki VC, mna ngokunyanisekileyo andazi mntu. Andizange ngokunyaniseka waba fan le VC ngaphandle kokuba kwi CS C-130 okanye 707
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #159 by Gh0stRider203
post Lemme kwamaQela FB endikulo .... mhlawumbi umntu apho baya kwazi!
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #163 by FCAIR
virtualaal.weebly.com/fleet.html Oku apho ndafumana khona umxokozelo ukusuka.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #164 by Gh0stRider203
Ya uyazi ... ndikwazi ukusebenzisa ezimbalwa yabaqhubi elungileyo ukuba unomdla
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #166 by FCAIR
Mna pretty entsha FSX I Abaziqiqa owam pilot elungileyo kule ngongoma. Kodwa mna ndinomdla ekwenzeni into nje inkqubela sim. Kwaye waseMelika Airline endizithandayo ezo iinqwelomoya okuqala kunye nepeyinti. Ungaze Yazi ..
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #167 by Gh0stRider203
okoko nje ungafumana A ukhombe b, kwaye ukuqabula moya kwi kokwehla, ukuba kuhle lol. kalokunje moya endala esinayo iBoeing Clipper 314 yesibini endala wayeza kuba 707
Ixesha ukwenza page: 1.305 imizuzwana